တင်ဆောင်လာသူငယ်ချင်းတွေ–စိတ်ဝင်စားလာရောက်ပူးပေါင်းအတွက်အကောင်းဆုံးခရီးအင်တာနက်ပေါ်မှာအများအတွက်ဆှဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာ? ကောင်းစွာ၊အလွန်ကြီးစွာသောသတင်းလိင်ဂိမ်းဒေါင်းလုပ်ကဒီမှာသင်ပေးရန်နှင့်အတူနှိုးဆှအစည်းအဝေး၏အကြိုက်သောသင်ဖွယ်ရှိသာမြင်ယောင်ကြည့်ပါ! ကျွန်မတို့လှုပ်ဖြစ်အများအပြားအကိုင်းအခက်အဖြစ်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအယုတ်အသီးအႏွံအားလုံး၏အဆိုပါေျမကြက္အခုတော့ကျွန်မတို့ဟာသွားရန်သင်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့အခါကျနော်တို့အတူတကွကြှနျုပျတို့ခေါငျးကိုတင်နှင့်ဆုံးဖြတ်ဖန်တီးရန်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုများ၏ညစ်ညမ်းသောထွက်ရှိပါတယ်လူတိုင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။, ဒါဟာသတိရဖို့အရေးကြီးကြောင်းအရာအားလုံးထဲမှာရှာတွေ့ကဒီမှာလုံးဝအခမဲ့သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်–အဘယ်သူမျှမနေလျှင်၊သို့မဟုတ် maybes။ ငါပျော်မွေ့ချနိုင်မှအပြည့်အဝဂျီကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအပေါ်ရှိဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှစဉ်းစားနေကြောင်းတရားစွဲဆိုခံရတော်တော်တစ်ပြားမှရနိုင်ရန်အတွက်။ လိင်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်ပြသခဲ့သည်အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အသင်အတူတကွသွင်းထားစိတ်ကူးစုဆောင်းခြင်း၏ဂိမ်းများနှင့်အတူ–အနည်းငယ်သာလိုအပ်သောလမ်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အားဖြင့်လူအကြောင်းဘာကိုသင်ရှိသည်အကောင်းဆုံး။, ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီး၊သက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းခြုံငုံအစည်းအဝေးနေတဲ့အကြောင်းအတွက်လုပ်ကြဖို့–လာဘယ်အရာကိုမြင်လိင်ဂိမ်းဒေါင်းလုပ်အားလုံးလောက်သည်အသင်လည်းသိအနိုင်ရကျော်အားလုံးသေနတ်ဂိမ်းအရပ်ထွက်ရှိပါတယ်ရိုးရှင်းစွာလဲမသိဘူးအကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအလွန်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံ!
လိင်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်ခဲ့ရာင်းနေအရသွားဖို့အပူဆုံးတည်နေရာကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာအများအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆအလွန်စတင်ချိန်မှစဖို့ပဲအိပ်မက်ကြီးကြီးမားမားအောင်တော့ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ပေးသူမည်သူမဆိုချင်တယ်လက်လှမ်းမီဒီပျော်မွေ့ရန်နိုင်စွမ်းကိုအပြည့်အဝဂျီနှင့်စုဆောင်းမှု၏ခေါင်းစဉ်နှင့်ထိုသူတို့အဘို့အကောင်းကိုခံစားရဖို့အကြောင်းကြောင့်လည်း။, လိင်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ဖို့ခဲယဉ်းတက်ကြီးခေါင်းစဉ်နှင့်အဆုံးရလဒ်ခဲ့သည်တကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်:ကျွန်တော်ထင်ရေနွေးငွေ့ရတဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်းအဆက်အသွယ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုမှထုတ်ဝေဖြန့်ချိပြီသင်သည်သူတို့ပလက်ဖောင်းပေါ်ပါကသူတို့ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိ XXX ပစ္စည်းရှိပါတယ်! ယခုကြောင်းသတိပြုမိဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီကြည့်ရှုအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးအာကာသရှိသည်ဖော်ထုတ်ကိစ္စရပ်များကိုတစ်အရေအထွက်ရှိပါတယ်:အရာတစ်ခုခုကျနော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖို့ခဲယဉ်းမှန်ကန်သောအားဖြင့်သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်၊အားထုတ်မှုနှင့်စွမ်းအင်ပေးခြင်းသို့သင်၏မုန့်အနှံမှကြွလာသောအခါလိင်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်။, ငါတို့သည်လည်းပူဇော်အဆိုပါစွမ်းရည်ကိုအဘို့ကစားရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့အပေါ်နဲ့ Linux စက်–လူတိုင်းကိုစောင့်ရှောက်ကြင္းပဲသဘာဝအများဆုံးပမာဏ၏!
တောက်ပ XXX ဇိုင်း
အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းများကိုဖန်တီးနေကြတယ်-အိမ်ဆိုလိုတာက၊အဘယ်သူမျှမကပြင်ပ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းငယ်သာအုပ်စုရှိမည်သည့်သြဇာလွှမ်းမိုးကျော်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကဖန်တီး။ ကြီးစွာသောအရာအကြောင်းဒီအကြောင်းကျွန်တော်ဟာအဆက်မပြတ်ဖါအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်အမှုအတွက်ကြောင့်တက်မရှငျပါဘူးမျှော်လင့်ချက်များနှင့်သဘာဝကျကျ၊ကြောင်းသေချာစေရန်ရှိသမျှတစ်ခုတည်းအစားရှိပါတယ်ထွက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့အမှန်တကယ်အလိုဆန္ဒ။ ဤအဘယ်သူမျှမကသာမန်ခရီးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းပဲသွားကြောင်းပြမှကြွလာသောအခါ၊ဒီအအာကာသ၊ကျနော်တို့လုံးဝကန်မြည်း။, ေဒါင္းေသာေနတုန်းမြန်လွန်း–ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများအတွက်အကောင်းဆုံးပေါက်နှင့်ငါတို့ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသောသေချာအောင်မျှမချွတ်ယွင်းကြားသင်ချို့တဲ့နေတဲ့ဂိမ်းနှင့်အမှန်တကယ်အနိုင်ကစားရန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရပ်ဖစ်အဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှရပ်တန့်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်သင်ထိပ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အတိုင်းသင်၌စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အမှန်တကယ်ကစား။ အသံတော်တော်စုတ်ကောင်း၊မှန်သော? ကောင်းစွာသင်အဖြစ်ကောင်းသိသည်အဘယ်သို့ပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံဒီမှာလာမယ့်အဆင့်အထိ။
ကျွန်တော်ထောက်ပြချင်အခုအချိန်မှာအဲဒါဟာလုံးဝအခမဲ့ဖွင့်ပူးပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းလိင်ဂိမ်းဒေါင်းလုပ်၊သင်ဆိုရင်မပျော်နှင့်အတူအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်၊ဒါကြောင့်တကယ်မရှိကြောင်းခက်ခဲအတြင္းတက်သင့်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယနှင့်အပေါ်ရရန်ထွက်အဖြစ်လျင်မြန်စွာတတ်နိုင်သမျှ။ ကျွန်တော်တို့စုဝေးစေအများကြီးတစ်ငရဲ၏အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသင်ပျော်မွေ့တာပေါ့ချွတ် jerking အားလုံး၏သူတို့ကို၊ဒါပေမယ့်ပါလျှင်ရုံဖြစ်ပျက်အဘယ်အရာကိုမျှကျွန်တော်တို့ပေးသွားမှာပါမှသက်ဆိုင်ရာသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွား၊အဘယ်သူမျှထိခိုက်မှုမရှိ၊ပုပ်!, ကြီးစွာသောအရာကနိုင်ဖြစ်ခြင်းအတွက်ချော်ဖို့ထွက်လျှင်မစီမံခန့်ခွဲမှတက်အသက်ရှင်ဖို့၏မျှော်လင့်ချက်များ၊သင်ဆဲမှဒဏ်ငွေခံစားရ၊ငါတို့သည်ဘဲတာဝန်ခံသင်သည်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏အရအတွေ့အကြုံ။ ဒါကြောင့်၊အပေါင်းကြောင့်အားလုံးတက်:ဒါဟာသဘောမျိုးတွေအများကြီးရမှာသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုလိင်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်နောက်ကျတာထက်ကျွန်တော်တို့မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ထိတွေ့ရတဲ့အပေါ်သင်နှင့်အတူအခြားဘက်ခြမ်း။ ဂုဏ်မင်္ဂလာ!